Kyi Wai Thaw's Page - Myanmar Network
Kyi Wai Thaw
Kyi Wai Thaw's Likes
Kyi Wai Thaw's Friends
Kyi Wai Thaw's Discussions
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ပြောတယ်။ နင် အက်ဆေး လေးဘာလေး ရေးပါလားတဲ့။ ကျွန်တော်က ကဗျာလေးတွေ ပဲ ရေးတတ်တာလေ။ ကျွန်တော်က ပြန်ပြောတယ်။ ငါက အစစ်တွေပဲ ရေးတတ်တာလို့။ သူက အစစ် တွေလည်း ရေးပေါ့။ အသစ်တွေလည်း…Continue
ဆရာတော်ဦးဝိစာရ ၏ နောက်ဆုံးသော သြ၀ါဒ
Started this discussion. Last reply by thadoethankyel Sep 18, 2012. 1 Reply2Likes
ကျွန်တော်လည်း ဒီဆိုဒ်ထဲကို မ၀င်မိတာ တော်တော်ကြာသွားပြီ။ facebook ထမှာပဲ အချိန်တွေ ကုန်နေမိတယ်။ ဟိုမှာ အပျော် အပြက်လေးတွေ လျှောက်လုတ် လျှောက်ရေးပေါ့။ ကိုယ် ကကောင်းကောင်း ရေးရင်တောင် သူတို့က…Continue
သုံးဆယ့် ခုနှစ်မင်းအကြောင်းရေးတဲ့ ဦးဖိုးကျား။
Started this discussion. Last reply by thant zin tun Sep 30, 2012.3Replies3Likes
ပြီးသွားသည့်စာအုပ်ကို ပြီးပြီ ဟု ထူးထူးခြားခြား ရိုးရိုးသားသား ရေးသားတတ်သော ဦးဖိုးကျား၏ သုံးဆယ့်ခုနှစ်မင်း အကြောင်း ရေးထားတဲ့ရှားရှားပါးပါး စာအုပ်လေးကို ကံကောင်းစွာနဲ့ ရှာတွေ့မိလို့ ပြန်လည်…Continue
Who Moved my Chese?(မပြောင်းလဲရဲကြဘူးလား။)
Started this discussion. Last reply by Waw_Joseph Jun 12, 2015.9Replies9Likes
Dr. Spencer Jhonson ရေးခဲ့တဲ့ Who Moved my Cheese? ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ထွက်ထားတာလည်း ကြာပါပြီ။ ဘ၀ တစ်ခုအတွက် လက်တွေ့ အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး လက်တွေ့ ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့…Continue
Red Ribbon From 2ktw3hu0tjfce
Kyi Wai Thaw's Page
At 14:05 on June 11, 2012, aungnaingwin said…
သူငယ်ချင်းရေငါလာပြီကွ လာလည်တယ်နော် naytoetorres@gmail.com
At 14:09 on May 7, 2012, yethura said…
At 12:33 on January 24, 2012, Yin Thiri Pyone said…
ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုယ်အချိန်ပေးနိုင်တဲ့ အချိန်လေးအတွင်းမှာ နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း အထောက်အပံ့ပေးမယ့် အသိပညာတွေပေးရင်တော့ အရမ်းဆုံးပေါ့ ။ အချိန်တွေပေးပြီး အပျော်တွေနဲ့ အချိန်ကုန်နေရင် အကျိုးရှိနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီလို အသိဥာဏ်ကောင်းလေးတွေ ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် အသိဥာဏ်တွေတိုးပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါစေ။
At 19:59 on November 27, 2011, ပိုင်လေး said…
i want to friend with u.
can u accept for me.
thanks. see u again later.
At 19:41 on September 3, 2011, noblezayar said…
At 15:54 on June 26, 2011, Soe Thiha said…
Happy birthday to you.....!!!
At 17:17 on June 15, 2011, Su Pyae Zaw said…
At 21:05 on April 11, 2010, Silly Fools said…
ကိုကြည်ရေ ဘော်ဒါဖြစ်ရတာ ဝမ်းသာပါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့် page မှာ ကိုကျော်ဇေဝင်း ရေးထားတာ ရှိတယ်ဗျ။ မှန်လွန်းအားကြီးလို့ copy paste လုပ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။
တစ်ဦးနဲတစ်ဦး အမြင်တူဖိုကအရေးမကြီးပါဘူး။ မတူညီတဲ့အမြင်ကို နားလည်လက်ခံတက်ဖို့အရေးကြီတယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါမှ အမြင်အတူ ဘဲ အတူနေ ထိုင်နွေးခွင့်တွေ ရှုင်သန်ကြီးထွားလာမှာပေါ့။"
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ.. ဒီလိုပဲ မိမိအတွေ့အကြုံအခြေခံပြီး ဆွေးနွေးရင်း တယောက်နဲ့တယောက် နားလည်မှူ ပိုတိုးလာတာပေါ့။
At 17:58 on March 30, 2010, Myint Maung said…